Europe, dalka quruxda badan ee quruxda iyo cirfiid warkii shaki la'aan waa go-to a caga waayo, safarka kasta waxaa enthusiast baxay. Iyada oo meelo baraaruga baqeen limitless booqashada, Europe waa yaqaan in ay noqon mid ka mid ah oo qurux badan dibadda xarumaha waxbarasho ee ardayda International sida ay leeyihiin Fadli ah xoomey ee xeebaha, jasiiradaha, daaraheeda waaweyn, Daar wayn, iyo taxadiri taariikhiga ah.
Salzburg waxa uu ku yaalaa on soohdinta reer Germany, dalka Austria, iyo waa jecelyahay by weyn ee Eastern Alps in si dhab ah waa hortiisa ah indhaha. Tani yaabka badan oo yar yaqaano magaalada Meelo tagidda Beautiful waa ku dhashay ee Mozart, ka laxamiistaha music caan, kuwaas oo
Maxay ahayd mar magaalo biyoodka, Constanta hadda waa kan saddexaad ee ugu weyn Romania magaalada iyo Meelo kale oo qurux badan oo Yurub caan ku ah, iyo dekedda qaylo dhaanta ee ku taal daanta galbeed ee Badda Madow.
Constanta hoy u xaqiijin fara badan goobaha dalxiiska dib toban meelood oo qarnigii, oo ay ku jiraan Square Ovid ah, meesha taallo naxaas ah artist ah Roman a Ovid taagan, iyo ka tanaasushay Constanta Casino, kaas oo kasoo muuqday Architecture-of Art Noveau. Constanta sidaas oo kale ayaa laga yaabaa in ay seashores farxad ugu, halkaas oo aad Doono fursad u hesho in ay cadceedsato iyo dabciyo kor. Xaaladdan oo aad ku sugan tahay adventurous ah niyadda, waxaa jira safarro dhowr maalmood ah ka Constanta, taas oo ka mid ah booqasho laba Heritage Sites UNESCO kuwaas oo Danube iyo Tulcea oo ay la socdaan nasto dhamaadkii at a caan dalxiis tago xeebta, Mangalia.
Qarsoon hoos Hoos dhammaan beelaha Belgian more caan ah magaalooyinka sida Antwerp iyo Brussels, Ghent waa jawharad qarsoon ee Belgium. Iyo magaalooyinkeedii oo xiiso leh iyo disorder fog ka yar, Ghent waa ku filan in yar in aad dareentid raaxo iyo ku filan u weyn in dhallaanka aad waayo-aragnimo. Haddii aad jeclaan of matxafyada quruxsan, baararka Casrisan, iyo dhinaca kanaalka views, aad si xaqiiqo ah u baahan doontaa in aad ku darto Ghent in safarka aad faahfaahin. Qayb ka mid ah meelaha aan waajib ahayn in la iska indho tiri waxaa ka mid ah Gravensteen, guri nagaadi tobnaad ee qarnigii la kanaalada iyo views cajiib ah, Belfry ee Ghent, iyo St Baro Cathedral.
Tixgeli booqanaya Helsinki inta ay joogto u ah maalmaha xagaaga si kor loogu qaado waqti aad waxaa ama saaray kabaha gutsy iyo diriraan habeenkii jiilaalka blanketed. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro weyn oo ka mid ah indhaha si aad u aragto, ma waxaad yeelan doontaa fursad u gebi ahaanba shaaca ka qaad sir kasta way haysaa!
Kala qeybsan Croatia waa Meelo quruxsan oo yar oo caan ah oo qurux badan fasax haddii aad ugaarsi ugu jirto dhacdo dhaceysa mingling magaalada xeebta leh vibes qaboowga Mediterranean. halkan cunnada ay Dalmatian oo ay weheliso ka cuntada badda cusub salaax doonaa dareeme oo aad ka heli on jilbahaaga!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flesser-known-beautiful-destinations%2F%0A%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
meelaha ugu quruxda badan europedestinations lesserknowndestinations smallcities smalldestinations
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Switzerland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boortaqiiska, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe, Safarka Iceland